'जिरो’मा शाहरुखको यस्तो छ रुप !(भिडियो सहित)
‘जिरो’मा शाहरुखको यस्तो छ रुप !(भिडियो सहित)
बुधबार, १९ पुष, २०७४ 0प्रतिक्रिया
पुस १९, विराटनगर
बलिउड स्टार शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ‘जिरो’को टिजर हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । टिजरमा शाहरुखको अवतार एकदमै भिन्न देखिएको छ । टिजरमा उनलाई सामान्य मानिसहरु भन्दा एकदमै होचो र पुड्को देख्न सकिन्छ । हाल युट्युबको ट्रेनडीङ नम्बर ४ मा रहेको ‘जिरो’ टिजरलाई हालसम्म ७.६ मिलियन पटक हेरिसकिएको छ । जसमध्ये झन्डै २ लाख जतिले टिजरलाई मनपराएका छन् भने १२ हजारले रुचाएनन् ।
रेड चिल्ली र कलर एल्लोले निर्माण गरेको यो चलचित्रलाई आनन्द एल राईले निर्देशन गरेका हुन् भने चलचित्र निर्माता गौरी खान हुन् । डिसेम्बर २१ मा रिलिज हुने यो चलचित्रमा शाहरुख साथै कैटरिना कैफ, अनुष्का शर्मा लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेको छ ।